Dankook University - Tacliinta Sare Abroad ee South Korea
gaabinta : DKU
aasaasay : 1947
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Dankook
Qor at University Dankook
Under ka mottos asaasiga ah ee “Badbaadada Qaranka, Independence iyo Is wax u qabso,” iyo sidoo kale mabaadiida hogaamineed ee “Runta iyo Service,” University Dankook ayaa si daacad ah ku qaadeen hawlgallada ee qurxinta da'yar ah iyo fududeynta horumarinta tacliinta ay.
In 1967, University Dankook waxaa Qolol in xaaladda jaamacadda. Iyadoo hordhaca ah ee campus labaad ee Cheonan, DKU noqday dhexdooda jaamacadaha Korea ee ugu horreeya in ay campus laan. DKU ayaa sii kobaca phenomenal la iridda ay isbitaalka ilkaha ee 1984 iyo isbitaalka guud ee 1994.
Ka dib markii ay 60 sano taariikhda ka kibirsanu Seoul, DKU raray xarunteeda ugu weyni inay Jukjeon in 2007, in dadaal lagu doonayo in isu diyaariyaan orgida a Rafaa weeraryahanka da'da caalami ah. Ka dib markii ay 30 sano ee isku duwidda oo gooni loo sooco, aan ayaa dhameystirtay “An Unabridged Dictionary of Characters Chinese loo adeegsaday in Korean” – ugu dheer oo ugu faahfaahsan ee noociisa ah. Intaa waxaa dheer, ka dib markii guul ah 2010 dalab u College Pharmaceutical a on campus Cheonan ah, waxaan aasaaskii ku dhigay adag ee ku takhasusay cilmiga nolosha. LINC Project Group campus Cheonan ayaa waxaa soo xulay sida ee qaranka ugu fiican, oo waxaa la samayn mashaariic kala duwan ka yar goolka of dejinta heerka iskaashiga warshadaha-jaamacadeed. Dhanka kale, campus Jukjeon ayaa diirada ay cilmi-baarista iyo maalgashiga on Technology Information (IT) Dhaqanka iyo Technology (CT). Iyadoo guusha dhawaan ka dhacay mashaariic dawladda, 'Intellectual Property Project Waxbarashada’ iyo 'Project Qodista Jaamacadood ee xawaaladaha-hormoodka,’ campus Jukjeon la qaadan orgida cusub si uu u noqdo weeraryahanka xarunta iskaashiga warshadaha-jaamacadeed iyo barnaamijyada xawaaladaha ganacsi.
Waxaan dhawaan soo gabagabeeyay Manhajkooda weyn ee kulliyadaha iyo nidaamka maamulka our sida qeyb ka mid ah dadaalka aan ugu jirno si ay mustaqbalka University Dankook ee sida mid ka mid ah jaamacadaha-heer caalami ah. Intaas waxaa sii dheer, waannu dhisnay nidaam adeeg top-of-the-line oo qanciya baahidaada macaamiisha, xawilaadda warbaahinta cusub iyo waxyaabaha waxbarashada, oo damaanad qaadaya cilmi ku ool ah iyo maamulka. Iyada oo ku saleysan natiijooyinka kuwaas oo, DKU ayaa dhafan dhismaha iyo bilaabay System Campus Dual a '’ laga bilaabo 2014, kaas oo diiradda saarayaa takhasuska.
Under banner ee “Challenge iyo abuurkii,” ka awood iyo shaqaalaha of University Dankook sameyn doonaa inti si kor loogu qaado tartan ee DKU iyo sare u xaaladda brand Dankook ah. Fadlan ka farxiyaa, waayo Dankook ee “Challenge iyo abuurkii” sida aan ka dhigi boodboodi si ay u noqdaan hogaamiye ee cusub.
Madaxweynaha University Dankook
Falsafada aasaasay of University Dankook - Badbaadada Qaranka, Independence iyo iskaa wax u qabso - billaabay ka hadafyada shakhsiyeed kaasoo innaga iyo Aasaasayaasha Mudane. Beomjeong, Chang Hyong iyo Mrs. Hyedang, waayo Huijae ayaa kaymo naftooda ku dhex qasan jeer taariikhda Korean. Waxay si shakhsi ah ayaa la kulmay caloolxumaanta waayaan dalka xukumayey Japanese iyo ugu danbeyn ahaayeen qanacsanahay in madaxbanaanida keliya lagu gaari karaa iyada oo loo marayo wacyi shaqsiyaadka tayo leh oo waddani. Labada Aasaasayaasha ogaaday in aqoon u lahaa in ay isticmaalaan awoodooda aan ku xirnayn dan shaqsi ah laakiin quruuntii oo dhan, kexeeyey by dareen aqoonsi heer qaran iyo heer taariikhi ah runta / bulshada. Indeed, wayna rumaysteen waxay ahayd University Dankook Saarra inay tababaraan shakhsiyaad iftiimiyey sida.
Waxa intaa dheer in hadafyada sida, University Dankook xannaaneeyaa runta iyo adeegga sida mabaadi'da ay ku hogaamiyay. Waa la aaminsan yahay in ujeedada cilmi-baarista iyo daraasadda been ka baxsan si fudud u helitaanka qalab Risqi - ujeedada kama dambaysta ah ee waxbarashada sare waa kobcinta aqoonta aadanaha iyo dhaqanka. Mabda'iyan, culimada waxaa ku waajib ah inuu ku soo laabto aqoon sida bulshada iyo ka qayb qaataan horumarinta taariikhiga ah. Waa in ay doonayaan in ay horumariyaan fiiqan, maskaxda muhiim ah oo ah qof moral xaqa ah; by saas iyo si iskood ah samaynayaan ka qayb oo dhan in hagaajinta ee bulshada, mid iskuna Jidka Dankook uu rabo inuu u soo bixiyey. Waxa uu ahaa kaliyeeli liicliicashola'aan dhinaca ogaaday waajibaadka sida tacliinta sare iyo waddaniyad ayaa keentay in jiritaanka University Dankook ee ay foomka hadda.
College of Art iyo Design
College of Science Bulshada
College of Management iyo Ganacsiga
College of Engineering, Kuliyadda Architecture
College of Technology Sare
College of Education Physical
Aasaaskii Jaamacadda Dankook la ansixiyay November 1, 1947, furitaanka meel ay qaadan at Nakwon-dong, Jongno-Gu'ga, Seoul, on November 3 ee isla sanadkaas.
Jaamacadda ayaa la bilaabay oo ku salaysan deeqaha dhaqaale ee dabayaaqadii Hyedang ah, Cho Huijae oo hore guddoomiye Park Jeongsook, iyo sidoo kale falsafada waxbarasho ee Beomjeong ah, Chang Hyong. At aasaaskeedii, jaamacadda lahaa 960 ardayda, iyadoo labo waaxaha ee Kulliyadda Law iyo saddex waaxaha ee Kulliyadda ee Arts Liberal. Professor Chang Dobin waxaa la caleemo sida Hormood ayuuna ugu horeysay.
Ma rabtaa wada hadlaan University Dankook ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Dankook on Map
Photos: Dankook University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Dankook
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Dankook.